71 Hoos udhacay Boqolkiiba Shaqsiyaadkii Ku Dhintay Shilalka Gaadiidka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul71 Waxaa hoos u dhacay Boqolkiiba Shaqsiyaadkii ku waayey shilalka taraafikada
Tirada dadka ku dhintay shilalka gaadiidka ayaa hoos u dhacay boqolkiiba boqol
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu lahadlayaa kaqeyb galayaasha isagoo kaqeyb galaya Shirka Qiimeynta Toplantı 2019 Oo lagu qabandoono Kongareeska Beştepe Millet iyo Xarunta Dhaqanka. waxay qaateen dhamaan talaabooyinkoo dhan si ay tiradaasi u sii yareeyaan.
Madaxweyne Erdoğan ayaa tilmaamay in tirada geedaha lagu beeray baaxadda mashaariicda wadooyinka ay kor u dhaafeen 68 milyan, wuxuuna xasuusiyay inay 11 milyan oo sapp ah ay ku bexeen Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta oo bilihii la soo dhaafay ay ka qeybgaleen xafladda abuuritaanka. xarumaha ganacsiga iyo dalxiiska Turkiga, Erdogan xusuusiyey in isku xira waddada weyn Istanbul-Izmir ee 426-kilomitir ah sida ay u furay adeeg sanadkii la soo dhaafay si ay cross in-Istanbul Izmir 8 saacadood 3,5 saacadood, Bursa 1 saac, Eskisehir ka 2- Wuxuu yidhi waxay ahayd 2,5 saacadood. Erdogan wuxuu sheegay inay sameyn doonaan wadada wadiiqo aad u kala duwan iyagoo u diyaarinaayo muuqaalka dhul gariirka.
96 Waxaan bilownay 90,5 km qaybta qiyaastii 298km waddo dhaadheer oo isku xirta Izmir iyo dekeda baarlamaan bishii Oktoobar ee la soo dhaafay. Inta kale ee taraafikada maalmaha soo socda ayaan furi doonnaa. Qeybaha harsan ee Kınalı-Odayeri iyo Kurtköy-Akyazı ee Wadada Waqooyiga Marmara ayaa iyagana la heli karaa bilaha soo socda. Waxaan kor u qaadnay tirada wadooyinka ee wadooyinkayaga oo gaaraya 381 iyadoo aan ku soo kordhinay 50 waxaanan kordhinay dhererka tunelada laga bilaabo 500 kiiloomitir ilaa XNUMX kiiloomitir. Waxaan marwalba dhahayaa inaan sii wadno jidkeena buurahan. Annaga oo aan tan sameynin, ma gaari karno awooddeena.
Shirka Qiimaynta 2019
Number of gaadiidka dalka Turkiga
Tirada baabuurta ee Turkey
Tirada dadka ku naf waayey shilalka taraafikada